Tower Defense Car Parking game - Online
နေအိမ် » ပြိုင်ပွဲ » Tower Defense Car Parking game
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Tower Defense Car Parking game
ထိန်းချုပ်ရေး: Play free Tower Defense Car Parking game. Use arrow key to play Tower Defense Car Parking game
ကစား: 20,001 tag ကို: မျှော်စင်ကာကွယ်ရေး, tower defense games, ကားတစ်စီးကားရပ်ရန်, ကားတစ်စီးကားရပ်ရန်ဂိမ်း, ကားဂိမ်း
အဆိုပါဂြိုလ်သားကဒီအံ့သြစရာသစ်တောကျူးကျော်ကြသည်နှင့်သင်ပင်လယ်အော်မှာသူတို့ကိုစောင့်မမည်အချို့မဟာဗျူဟာများနှင့်အတူတက်လာနိုငျသောတစ်ဦးတည်းသာရှိပါသည်။ သငျသညျဤရဲတိုက်ကိုကာကွယ်ရေးဂိမ်းထဲမှာအများအပြားထွက်နေတဲ့နေရာရပါလိမ့်မယ်, သင်ကောင်းစွာသူတို့ကိုဒါမှမဟုတ်ဂြိုလ်သားနေရာရမယ်လိမ့်မည်
wheely 8 ဂြိုလ်သား
တစ်ဂိမ်းအသစ် Wheely ခံစားကြည့်ပါ! သေးငယ်တဲ့အနီကားသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စွန့်စားမှုပဟေဠိဂိမ်း။ ဒီအချိန်, သငျသညျရွေဂြိုလ်သားနှင့်သင်၏လမ်းထိ မိ. လဲသင့်ရဲ့ဂြိုဟ်ပေါ်ပျက်ကျခဲ့ပြီ။ သူတို့အိမ်သို့ငြိမ်ဝပ်စွာ ပြန်. မလာနိုင်အောင်သူတို့သင်္ဘောကိုပြုပြင်မှကိုကူညီပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ
တာဝါတိုင်များထဲကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝင်္ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်၏လမ်းကွေ့များသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်လှိုင်းတံပိုးကိုရပ်တန့်။ အများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့ဂိမ်း Modes သာပါဝင်သည်။
အရူးအိပ်မက်တွေ: ကားကား2ကိုစား
scooby Doo မြန်နှုန်းကား
Scooby Doo သူ့ကိုပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းရမှတ်ရဖို့ဒီကားကိုမောင်းကိုကူညီတဲ့ပျော်စရာကားရှိသည်။ boot မှမောင်းထုတ်ရန်မြှားသော့ Space Bar ကိုအသုံးပြုခြင်း။
မွို့၌ကားအသွားအလာထိန်းချုပ်ပါ။ ယာဉ်အသွားအလာနှင့်အညီအတွက် semaphore အချက်ပြမှုများကိုပိတ်ပြီးနှင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်လမ်းမ၌အဘယ်သူမျှမမတော်တဆမှုရှိပါတယ်ကြောင်းသေချာပါ။ ယာဉ်အသွားအလာအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုသင်၏လက်၌ရှိ၏
Deluxe: ကားကား2ကိုစား
ဒီချစ်စရာကားနောက်တဖန်ဒုက္ခ၌ရှိ၏။ သငျသညျကိုပယ်မကောင်းသောအချွန်-သွားလမ်းမိကျောင်းကနေမောင်းထုတ်ဖို့ဘယ်လိုမေ့လျော့ပြီမဟုတ်လော သငျသညျမဟုတျလော ဒါဟာအလွန်ကောင်းပါတယ်။ သင့်ရဲ့အင်ဂျင်မောင်းသူ Start! သုံးအဆင့်ကိုအထုပ်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်။
သငျသညျကျိန်းသေအချိန်ကိုသုံးစွဲနောင်တမရဦးမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီအေးမြ flash ကိုပြိုင်ကားဂိမ်းထွက်စစ်ဆေးပါ။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ပြုပါနှင့်သင်အနိုင်ရလိမ့်မည်ရှေ့တော်၌ထိုအပြေးပြိုင်ပွဲပြီးအောင်လုပ်ပါ။ ရရှိခဲ့သည်ငွေကိုအခြားကားများနှင့်ကားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဝယ်ဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထိုပြိုင်ကား TR ပတ်ပတ်လည်မောင်း
Kart စူပါ Go ကို Turbo နျူကလီးယားမှာကျော် developer များအနေပျော်စရာဂိမ်းအသစ်၏! ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအပြေးပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းထိမှန်နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးပြိုင်ကားသမားကိုရွေးချယ်ပါနှင့် Kart သွားစတင်မှာ Mone ဝင်ငွေနိုင်သကဲ့သို့အစာရှောင်ပြီးယှဉ်ပြိုင်တိုင်းအပြေးပြိုင်ပွဲအနိုင်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်
စပျစ်သီးကို bug ကိုယုန်စိန်ခေါ်မှု
သင်တစ်ဦးအေးမြစပျစ်သီးကိုကားစီး Bugsy ရဲ့ယုန်ဖြစ်ကြသည်။ ဤတွင်ဏစုဆောင်းနေစဉ်, ဘယ်လောက်မြန်မြန်သင်ကွဲပြားခြားနားသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတားအဆီးများနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်အဆင့်ကိုဖြတ်ပြီးယုန်ရတဲ့အားဖြင့်လူအစုအဝေးမောင်းနှင့်အထင်ကြီးနိုငျကျည်ဆံများကဲ့သို့လူတိုင်းကိုသက်သေပြဖို့ရန်သင့်အခွင့်အလမ်းဖွင့်
Kart 3d သွား
Go ကို Kart 3D အတွက်ပြိုင်ကားကိုရယူပါ။ သင် Go ကို Kart 3D ချန်ပီယံအဘို့အပြေးပြိုင်ပွဲအဖြစ်4ပုဒ်ကိုဖြတ်ပြီး3အခြားပြိုင်ကားသမားအပေါ်ကိုယူပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအဆင့်အတန်းထောင့်နှင့်ဖြောင့်ကိုယူပြီးကျသောအခါဒါကြောင့်သင့်အကြောင်းသင့်ရဲ့တစ်သိန်းစောင့်ရှောက်ခက်ခဲလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟန်အတိုင်း, အခြားပြိုင်ကားသမားထွက်သည် Watch
သငျသညျကွိုးစားပါနဲ့6အခြားပြိုင်ဘက်လွန်အဖြစ် 3D ပတ်ပတ်လည်ပြေးပြိုင်ပွဲခြေရာခံ။ သငျသညျလာမည့်ခွက်ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ 4th ရာအရပျသို့မဟုတ်မြင့်မားအရည်အချင်းပြည့်မှီရန်ရှိသည်! Good Luck!
သင့်ရဲ့အားကစားကားထဲတွင်ကျွန်းများတဝိုက် Cruise နဲ့! Cruisin လူမျိုး Zombooka2 အဆင့် Pack ကို Turbo ဂေါက်သီး Spitfire1940 Sniper တစ်နှစ်တာ 1 Cyclomaniacs Cruisin, ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်ကျွန်းလူမျိုးတစ်ဦးစီးရီးပတ်လည်မှာသင့်ရဲ့အားကစားကားတွေမောင်း, သင့်ကားကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လူမျိုးအနိုင်ရ
mars စစ် td
စစ်အရူးရှိ၏ပြီးတာနဲ့သူတစ်ဦးကမ္ဘာစစ်စတင်, မိမိရည်မှန်းချက်နှိပ်စက် world.To တစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစား, သငျသညျမိမိအ army.You သင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းကိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်အရာအားလုံးကိုလုပျဆောငျရမညျခုခံတွန်းလှန်ရန်ကာကွယ်ရေးကိုသင့်မျဉ်းစည်းရုံးရမယ်, ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ္ဘာ၏ထဲမှာတည်သည်
အမြန် Be နှင့်စမတ်စေသတည်း သည်အခြားကားများဆန့်ကျင်မျိုးနွယ်နှင့်သင်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတစ်ကြောက်မက်ဘွယ်လေယာဉ်မှူး Show! ဒါဟာကျိန်းသေလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သငျသညျအကြီးအမြန်နှုန်းနှင့်အတူမောင်းဖို့ရှိသည်, သင်တို့အဘို့ကိုပျက်စီးစေနှင့်သင်တတ်နိုင်သမျှအားလုံးဖြစ်နိုင်ချေပိုဆုကြေးငွေရအံ့သောငှါအအခြားကားများထွက် watch! ဖြစ်
SpongeBob speedcar ပြိုင်ကား
SpongeBob သူသည်မိမိအအမှတ်တံဆိပ်အသစ်စီးနင်းအတွက်မြို့ပတ်လည် whizzes အဖြစ်သူ့ကို join, ဤကွီးစှာသောရေကူးဝတ်စုံနဲ့အောက်ပြိုင်ကားစွန့်စားမှုအတွက်ပျော်စရာ၏ဂါလန်ရှိခြင်းနေပါသည်!
သငျသညျ6အခြား Porsche ကြိုးစားကြည့်ပါနှင့်ရှောက်သွားအဖြစ် 3D ပတ်ပတ်လည်ပြေးပြိုင်ပွဲခြေရာခံ။ သငျသညျလာမည့်ခွက်ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ 4th ရာအရပျသို့မဟုတ်မြင့်မားအရည်အချင်းပြည့်မှီရန်ရှိသည်!
ထိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာခရီးပေါ်တွင်သင်၏အနက်ရောင် Lamborghini ကမောင်း, လမျးပျေါမှာငွေကြေးနှင့်လောင်စာလှောင်ကန်ဖွင့်ကောက်!
အသီးအသီးအဆငျ့ရှိချဉ်းကပ်လမ်း၏အမြင့်နှင့်မြန်နှုန်း Set အပေါင်းတို့နှင့်အတူအခြားကားများကိုဖကျြဆီး! အသီးအသီးအဆငျ့ပြီးနောက်သင့်ရဲ့ကားများအတွက်ပိုကောင်းအဆင့်မြှင့် Buy ။ သင့်ကားကိုဖကျြဆီးကွပါစို့ !!!
gotham မြို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အပေါ်စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှား Batman စူပါထရပ်ကားမောင်းကိုကူညီပါ
ဖော်မြူလာပြိုင်ကားသမား 2012 ခုနှစ်,
သငျသညျကွိုးစားပါနှင့် 31 အခြားပြိုင်ကားသမားလွန်အဖြစ် 3D ပတ်ပတ်လည်ပြေးပြိုင်ပွဲခြေရာခံ။ သူတို့အားထောင့်နှင့်ဘရိတ် Watch!
Batman ထရပ်ကား 3
အဆိုပါ Cape လူတစ်ယောက် Batman အန္တရာယ်များတဲ့ drive ကိုပြန်ပါ! သူစမ်းသပ်ဒီအေးမြမောင်းနှင်မှုဂိမ်းထဲမှာအံ့သြဖွယ်မော်တော်ယာဉ်များသည်မိမိအသစ်စင်းကိုမောင်းအဖြစ်အားလုံးအဆင့်ဆင့်ကတဆင့် Dark Knight drive ကိုကူညီပါ။
Check out this cool NASCAR racing game called Dirt Racers! Drive your muscle car onahighway and smash into the other cars. Keep in mind that in the upper right corner you will seeabar that indicates how much damage can your car can take.
Go to Space by your car.